Araka ny Youtube, horonan-tsary 72 ora no ampakarina isa-minitra! Misioka 400 heny an-tapitrisany isan'andro ireo mpampiasa Twitter. Eto amin'ity tontolo feno tabataba ity dia sarotra ho an'ny vokatra, tranokala na serivisy ho re. Mbola mafy kokoa aza izany raha tsy misy tena miavaka amin'ilay zavatra amidy. Isan'andro, ny mpivarotra dia miatrika fanamby hiakatra ambonin'ny tabataba. Amin'ny fanantenana fanentanana amin'ny famoronana, hitodika any amin'ny 2009 aho